कांग्रेस अधिवेशन: चितवनमा काे-काे विजयी भए ? - Globe Nepal
कांग्रेस अधिवेशन: चितवनमा काे-काे विजयी भए ?
ग्लोब नेपाल	शनिबार, ०४ मंसिर २०७८ गते ११:४१ मा प्रकाशित
चितवन, ४ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको १४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत चितवनका ६ वटा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनबाट एक सभापति र दुई-दुई जना उपसभापति, सचिव र सहसचिव निर्वाचित भएका हुन् ।